२०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको अपिको नाफा ५ करोडभन्दा बढी | गृहपृष्ठ
Home लगानी २०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको अपिको नाफा ५ करोडभन्दा बढी
on: February 11, 2019 लगानी
२०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको अपिको नाफा ५ करोडभन्दा बढी
माघ २८, काठमाडौं (अस) । पूँजी वृद्धिका लागि लामो समयदेखि हकप्रद जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको अपि पावर कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा रू. ५ करोड १० लाख ९९ हजार खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा भने ६२ दशमलव ९० प्रतिशत बढी हो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा विद्युत विक्री आय ३३ प्रतिशत बढेकाले नाफा बढ्नमा सहयोग मिलेको हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म विद्युत विक्रीबाट रू. ७ करोड ९४ लाख ९६ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष सोही अवधिमा रू. १० करोड ६२ लाख ९५ हजार सोही शीर्षकमा आम्दानी गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात रू. १ अर्ब १३ करोड ४० लाख चुक्तापूँजी पु¥याएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने निर्णयलाई साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । सो बोनस शेयरपश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १९ करोड ७ लाख पुग्नेछ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम भने गत वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले कमि आएको छ । गत वर्ष रू. १२ करोड १४ लाख ६४ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्ष रू. ११ करोड २३ लाख ४३ हजार रहेको छ ।
कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा पुस मसान्तसम्म रू. १४ करोड ४१ लाख ३४ हजार लगानी गरेको छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ९ दशमलव शून्य १ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०९ दशमलव ९१ रहेको छ ।
अपि पावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ४ असार २०७६)
अपि पावर कम्पनीको हकप्रदलाई इक्राको गे्रड ४
अपि पावर : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २६ पुस २०७५)
दुई कम्पनीको साधारण सभा मंगलवार